MUNAASABADDA SOODHAWEYNTA BISHA RAMADAAN – Hope Generation – جيل الأمل
Ururada جيل الأمل – Hope Generation iyo Life Makers-Somalia صناع الحياة في الصومال waxa ay wadajir u qabateen Munaasabadda soo dhawaynta bisha barakaysan ee RAMADAAN. Munaasabaddan ayaa ka dhacayday xarunta xafladaha iyo munaasabadaha ee QARNI HOTEL ee is-goyska Afarta-Jardiino-Muqdisho.
Waxaa munaasabadda kasoo qaybgalay madax kasocotay Labada Urur, culumo caan ah, Abwaanno, iyo qaybo kale oo kamid ah waxgaradka bulshada. Sh Ustaad Aadan Xerow ayaa ku nuuxnuusaday muhiimadda udiyaargarowga bishan barakeysan ee RAMADAAN, wuxuu ku booriyey kasoo qeybgalayaashii inay si weyn u guddoomaan Alle hadiyadan uu siiyay, kana faa’iideystaan fursaddan qaaliga ah uu alle ku simay.
Ururka Hope Generation wuxuu ugu hambalyeynayaa guud ahaan shacabka soomaaliyeed, gaar ahaa dhalinyaradda iyo xubnaha ururka munaasabadda bisha barakeysan ee RAMADAAN. Ilaahay (SW) waxaan ka baryaynnaa inuu naga aqbalo Camalka wanaagsan ee aan qabanayno bishan, nooguna dhameystiro nabad iyo caafimaad.
Maaha markii ugu horeysay ee Labadan urur ay si wada jir ah usoo wada qabanqaabiyaan munaasabad nuucan ah, halkan ka dheeho Sawiradda Munaasabaddii Soodhaweynta Ramadaankii hore https://www.facebook.com/hogeso1/posts/931791376843499